XX5အောကျတိုဘာလ ၂၀၁၇ ၂၀၁၇ - နောက်ဆုံးပေါ် ကမ္ဘာ့ခေတ်အမှီဆုံး Open Source ဒေတာဘေ့စ် ဖြစ်တဲ့ PostgreSQL 10 ကို PostgreSQL ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ တိုးတက်ရေး အဖွဲ့ အစည်း မှ ယနေ့ထုတ်ပြန် ကြေညာလိုက်ပါသည်။
ယနေ့ Digital ခေတ် လုပ်ငန်းပမာဏ (workloads) တွေရဲ့ အရေးပါသောအချက်မှာ မြန်ဆန်သော အချက်အလက် ရယူနိုင်စွမ်း၊စီမံခန့်ခွဲနိုင်မှုနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်စွမ်း တို့ ရရှိနိုင်အောင် Nodes အများကြီးဆီသို့ ဒေတာ ဖြန့် ဖြူးနိုင်စွမ်းဖြစ်ပြီး ထိုအရာကို “Divide and Conquer” ဗျူဟာဟုလည်း ခေါ်ဆိုနိုင်ပါသည်။ PostgreSQL 10 ထုတ်ပြန်မှုတွင် ပါဝင်သည့် သိသာထင်ရှားသော တိုးတက်မှုများ မှာ native logical replication, declarative table partitioning နှင့် query parallelism ကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေခြင်းတို့ ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအရာ များသည် divide and conquer ဗျူဟာ ကိုထိရောက်စွာ အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ပံ့ပိုးပေးပါသည်။
“ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ IT ဆော့ဖ်ဝဲအသိုင်းအဝိုင်း သည် လုပ်ငန်းပမာဏ များ ကိုခေတ်မှီသော အခြေခံဖွဲ့ စည်းပုံများ နှင့်ကိုက်ညီသော အချက်များ တည်ဆောက်ခြင်းကို အဓိကထားပါသည်” ဟု Magnus Hagander၊ core team PostgreSQL ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ တိုးတက်ရေး အဖွဲ့ အစည်း အသင်းဝင် . "Logical Replication နှင့် Improved Query Parallelism စသောအချက်များ သည် ပြောင်းလဲလာသောနည်းပညာ ၏ တောင်းဆိုမှုအရ Postgres အသိုင်းအဝိုင်း၏ နှစ်ကြာရှည်စွာ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတို့ ကြောင့် သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍ တွင် ဦးဆောင်နေ မည်မှာအသေအချာပင်ဖြစ်သည်။"
ဤထုတ်ပြန်မှုသည် PostgreSQL versioning စနစ်ကို “x.y” ပုံစံအဖြစ်ပြောင်းလဲမှုကို အမှတ်အသားပြုပါသည်။ ဤအဓိပ္ပာယ်မှာ နောင်ထွက်ရှိမည့် အငယ်စား PostgreSQL version ထုတ်ပြန်မှုမှာ 10.1 ဖြစ်ပြီး နောင်အရေးပါသော PostgreSQL version ထုတ်ပြန်မှုမှာ 11 ဖြစ်ပါသည်။
Logical Replication - ဒေတာဖြန့်ဖြူး မှုအတွက် ထုတ်ပြန်ထားသော အခြေခံ အချက်များ
Logical replication သည် လက်ရှိ replication လုပ်ဆောင်ချက်များထက်သာပြီး မတူညီသော 54PostgreSQL ဒေတာဘေ့စ်များကို database တစ်ခုစာနှင့် table တစ်ခုစာ အဆင့်များအထိ 55ပြုပြင်မွမ်းမံနိုင်စွမ်းရှိပါသည်။ အသုံးပြုသူများသည် ယခုပြောင်းလဲမှုကြောင့် ဒေတာများကို ဒေတာဘေ့စ် 56အစုအဝေး အများအပြားသို့ ပုံတူပွားပြီး အသေးစိတ်ချိန်ညှိနိုင်ပါသည်။ အသုံးပြုသူများသည်လည်း 57အနာဂတ်မှာ ထွက်ပေါ်လာမည့် အရေးပါသော PostgreSQL versions များသို့တိုးမြှင့်ချိန်တွင် 58ကွန်ပျူတာ၏ အလုပ်လုပ်မှု နှောင့်နှေးချိန် မရှိပဲလုပ်ဆောင်သွားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
"ကျွန်တော်တို့ သည် PostgreSQL ကို version 9.3 ထဲက ကျယ်ပြန့် စွာ အသုံးပြုခဲ့ပြီး ယခု version 10 အတွက် လွန်စွာ စိတ်လှုပ်ရှားနေခြင်းမှာ version 10 သည် ကြာရှည်စွာစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသော လုပ်ဆောင်ချက်များဖြစ်သည့် Partitioning နှင့် Logical Replication တို့ ပါဝင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဤလုပ်ဆောင်ချက်များ ပါဝင်ခြင်းသည် ကျွန်တော်တို့ အနေဖြင့် PostgreSQL ၏ ဆောင်ရွက်မှုများကို ပိုမို အသုံးပြုလာနိုင်စေပါသည်။" ဟု Vladimir Borodin (DBA အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်) ကပြောကြားခဲ့ပါသည်။ Yandex.
Declarative Table Partitioning - ဒေတာကို ခွဲခြားရာတွင် အဆင်ပြေမှု
Table Partitioning သည် PostgreSQL မှာတည်ရှိခဲ့သည်မှာနှစ်ပေါင်း များစွာရှိခဲ့သော်လည်း အသုံးပြုသူသည် partitioning ကိုအသုံးပြုမည်ဆိုလျှင် လိုက်နာရမည့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို ထိန်းသိမ်းရန်လိုအပ်သည်။ PostgreSQL 10 သည် partitioned tables များကို list လုပ်ခြင်းနှင့် range ဖန်တီး ထိန်းသိမ်းခြင်းများကို Table Partitioning syntax အဖြစ် အသုံးပြုသူများကို မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါသည်။ PostgreSQL များအတွင်း addition of the partitioning syntax သည် ကောင်းမွန်သော Partitioning အခြေခံကို ပေးဆောင်နိုင်အောင် စီစဉ် ထားသည့် ပထမဆုံးခြေလှမ်း ဖြစ်ပါသည်။
Improved Query Parallelism - စိစစ်လေ့လာမှုကို လျင်မြန်သောနည်းဖြင့် ပြီးစီးခြင်း
PostgreSQL 10 သည် query ၏အစိတ်အပိုင်းမြောက်များစွာ ပြီးစီးခြင်းနှင့်ပတ်သက်သော လုပ်ငန်းများကို parallelize လုပ်ရာတွင် ယခင်ထက် ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ တိုးတက်မှုများမှာ parallelized ဖြစ်ပြီးသား data scans အမျိုးအစားအသစ်များနှင့် pre sorting ကဲ့သို့ data များ ပြန်လည် ပေါင်းစပ်ပြီး ဖြစ်ပေါ်လာသော အဆင့်မြှင့်တင်မှုများပါဝင်သည်။ဤ တိုးတက်မှုများသည် ရလဒ်များကို လျင်မြန်စွာ ရရှိနိုင်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးပါသည်
Quorum Commit for Synchronous Replication – Data များကိုပိုင်နိုင်စိတ်ချမှုဖြင့် ဖြန့် ဖြူးခြင်း
PostgreSQL 10 သည် synchronous replication အတွက် quorum commit ကို မိတ်ဆက်ပါသည်။ ဤလုပ်ဆောင်ချက်သည် primary database ၏ လုပ်ငန်းတွင်ပါဝင်သော အချက်အလက်များကိုအဝေးမှ ပုံတူပွားယူနိုင်စွမ်း remote replicas ဖြင့် ပြုလွယ်ပြင်လွယ်ရှိအောင်ဖန်တီးထားသည်။ ယခုအခါ administrator တစ်ယောက်သည် မိမိ၏ database ထဲတွင် ပုံစံတူ ဘယ်နှစ်ခု ပြုလုပ်ထားသည်ဆိုသည့် ပြောင်းလဲမှု ရှိလာတိုင်း သတ်မှတ်သိရှိနိုင်ခြင်းဖြင့် data များကို လုံခြုံစိတ်ချစွာပြုပြင် ရေးဆွဲ နိုင်ပါသည်။
"PostgreSQL 10 တွင်ရှိသော sychronous replication များအတွက်သုံးနိုင်သည့် Quorum commit သည် သုံးစွဲရာတွင် ကွန်ပျူတာ အလုပ်လုပ်မှု နှောင့်နှေးချိန် မရှိဘဲ database infrastructure များ၏ ပြုနိုင်စွမ်း ပိုမို ကောင်းမွန်စေသည် ။ ဤလုပ်ဆောင်ချက်သည် windows များကို ကြာရှည်ထိန်းသိမ်းပြုပြင်ရန်မလိုအပ်ပဲ ကျွန်တော်တို့ ၏ database infrastructure ကိုအဆက်မပြတ်သုံးစွဲ၊မြှင့်တင်ခြင်းပြုလုပ်နိုင်သည်" ဟု Curt Micol,Staff Infrastructure Engineer at Simple Finance.
SCRAM-SHA-256 authentication - ဒေတာကို လုံခြုံစိတ်ချစွာ အသုံးပြုမှု
Salted Challenge Response Authentication Mechanism (SCRAM) ရဲ့ အဓိပ္ပာယ် သည် RFC5802 တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။ SCRAM သည် data သိမ်းဆည်းမှုနှင့် passwords များ ဖလှယ်ခြင်းတို့ လုပ်ရာတွင် ပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်သော password လုံခြုံရေး အခြေခံများကိုပေးပါသည်။ PostgreSQL 10 သည် SCRAM-SHA-256 authentication နည်းလမ်းကိုစတင် မိတ်ဆက်ပေးပါသည်။ ဤနည်းလမ်း၏ အဓိပ္ပာယ်ကိ RFC7677ှာဖော်ပြထားပါသည်။ ဤနည်းလမ်းသည် လက်ရှိ MD5-based password authentication နည်းလမ်းထက် ပိုမိုကောင်းမွန်သော လုံခြုံရေးကိုလည်းပေးပါသည်။
အထက်ပါဖော်ပြထားသောလုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်အခြားအရာများ၏ရှင်းလင်းတင်ပြချက်အတွက်, အောက်ဖော်ပြပါ resources များကိုကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
HTML documentation and man pages များသည် PostgreSQL ထဲပါဝင်ပြီးသာဖြစ်သော်လည်း, online documentation တွင်ရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ online documentation.
PostgreSQL သည် PostgreSQL License,, ကိုသုံးပါသည်။ဤအရာကို BSD ကဲ့သို့"permissive" license ဟုလည်းခေါ်သည်။ထို OSI-certified license ကိုပြင်လွယ်ပြောင်းလွယ်နိုင်ပြီး လုပ်ငန်းကျွမ်းဝင်မှုရှိသည့်အပြင် PostgreSQL သည်စီးပွားဖြစ် ကိုယ်ပိုင် အသုံးပြုခြင်းကို ကန့် သတ်ထားခြင်း မရှိသည့်အတွက် များစွာ အသိအမှတ်ပြုထားပါသည်။ ကုမ္ပဏီများ၏အားပေးထောက်ခံမှုနှင့်တကွ အများပိုင် code ဖြစ်သည့်အတွက် ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်းတွင် database အသုံးပြုချင်သူများအား လိုင်စင် သတ်မှတ်ချက်အပြောင်းအလဲများ၊ vendor lock- in၊ဈေးနှုန်းများအတွက် ပူပင်မှုကင်းခြင်းအတွက် ဤလိုင်စင်သည် PostgreSQL ကိုလူကြိုက်များစေပါသည်။
Suu Myat Khin
+95942011 5959
အမှတ်အသားအားလုံးကို PostgreSQL လိုင်စင်အောက်မှာ ပြုပြင်ခြင်းနှင့် ပြန်လည်ဖြန့် ဖြူးခြင်း တို့အား လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။ PostgreSQL နာမည်နှင့် အမှတ်အသားများသည် ကနေဒါရှိ PostgreSQL အဖွဲ့အစည်း ၏ မူပိုင်လက္ခဏာဖြစ်သည်။
PostgreSQL သည် ကမ္ဘာ့ ခေတ်အမှီဆုံး open source database ဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ ထောင်ကျော်သော အသုံးပြုသူများ၊အကြံပြု ပါဝင်သူများ၊ ကုမ္ပဏီများနှင့် အဖွဲ့ အစည်းအများအပြားသုံးစွဲသော database ဖြစ်ပါသည်။PostgreSQL စီမံချက်စတင် တည်ဆောက်ခဲ့သည်မှာ နှစ်ပေါင်း ၃၀ကျော်ရှိလာခဲ့ပြီး Berkeley ရှိ University of California မှာ စတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤစီမံချက်၏ ဖွံဖြိုးတိုးတက်လာမှုနှုန်းများသည် မယှဉ်နိုင်လောက်အောင်ပဲရှိခဲ့ပါသည်။PostgreSQL ၏ ပြီးပြည့်စုံသော အချက်သည်ထိပ်တန်း database system တွေနှင့်ယှဉ်နိုင်ရုံတင်သာမက ပိုမိုအဆင့်မြင့်သော database အချက်အလက်များရှိမှု ၊ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုနိုင်မှု၊အာမခံချက်ရှိမှု၊တည်ငြိမ်မှုတို့တွင် ပိုမိုကောင်းမွန်ကြောင်းတွေ့ရသည်။ PostgreSQL အကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပြီး၊ PostgreSQL ၏အသိုင်းအဝိုင်းတွင် ပါဝင်ချင်သည်ဆိုပါက အောက်ဖော်ပြပါ website သို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ PostgreSQL.org.
"ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ IT ဆော့ဖ်ဝဲအသိုင်းအဝိုင်း သည် လုပ်ငန်းပမာဏ များ ကိုခေတ်မှီသော အခြေခံဖွဲ့ စည်းပုံများ နှင့်ကိုက်ညီသော အချက်များ တည်ဆောက်ခြင်းကို အဓိကထားပါသည်" ဟု Magnus Hagander core team PostgreSQL ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ တိုးတက်ရေး အဖွဲ့ အစည်း အသင်းဝင် . " Logical Replication နှင့် Improved Query Parallelism စသောအချက်များ သည် ပြောင်းလဲလာသောနည်းပညာ ၏ တောင်းဆိုမှုအရ Postgres အသိုင်းအဝိုင်း၏ နှစ်ကြာရှည်စွာ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတို့ ကြောင့် သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍ တွင် ဦးဆောင်နေ မည်မှာအသေအချာပင်ဖြစ်သည်။"
PostgreSQL သည် ကမ္ဘာ့ ခေတ်အမှီဆုံး open source database ဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ ထောင်ကျော်သော အသုံးပြုသူများ၊အကြံပြု ပါဝင်သူများ၊ ကုမ္ပဏီများနှင့် အဖွဲ့ အစည်းအများအပြားသုံးစွဲသော database ဖြစ်ပါသည်။PostgreSQL စီမံချက်စတင် တည်ဆောက်ခဲ့သည်မှာ နှစ်ပေါင်း ၃၀ကျော်ရှိလာခဲ့ပြီး Berkeley ရှိ University of California မှာ စတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤစီမံချက်၏ ဖွံဖြိုးတိုးတက်လာမှုနှုန်းများသည် မယှဉ်နိုင်လောက်အောင်ပဲရှိခဲ့ပါသည်။PostgreSQL ၏ ပြီးပြည့်စုံသော အချက်သည်ထိပ်တန်း database system တွေနှင့်ယှဉ်နိုင်ရုံတင်သာမက ပိုမိုအဆင့်မြင့်သော database အချက်အလက်များရှိမှု ၊ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုနိုင်မှု၊အာမခံချက်ရှိမှု၊တည်ငြိမ်မှုတို့တွင် ပိုမိုကောင်းမွန်ကြောင်းတွေ့ရသည်။ PostgreSQL အကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပြီး၊ PostgreSQL ၏အသိုင်းအဝိုင်းတွင် ပါဝင်ချင်သည်ဆိုပါက အောက်ဖော်ပြပါ website သို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။PostgreSQL.org.
"ကျွန်တော်တို့ သည် PostgreSQL ကို version 9.3 ထဲက ကျယ်ပြန့် စွာ အသုံးပြုခဲ့ပြီး ယခု version 10 အတွက် လွန်စွာ စိတ်လှုပ်ရှားနေခြင်းမှာ version 10 သည် ကြာရှည်စွာစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသော လုပ်ဆောင်ချက်များဖြစ်သည့် Partitioning နှင့် Logical Replication တို့ ပါဝင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ လုပ်ဆောင်ချက်များ ပါဝင်ခြင်းသည် ကျွန်တော်တို့ အနေဖြင့် PostgreSQL ၏ ဆောင်ရွက်မှုများကို ပိုမို အသုံးပြုလာနိုင်စေပါသည်။" ဟု Vladimir Borodin (DBA အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်) Yandex.
Yandex သည် မြင့်မားသောထုတ်ကုန် နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကို Machine Learning သုံး၍ တည်ဆောက်သောကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။ Yandex၏ ရည်မှန်းချက်မှာ အသုံးပြုသူနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကြား online နှင့် offline ကဏ္ဍတွင် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဆက်သွယ်ရေး ရရှိရန် ရည်ရွယ်သည်။ ၁၉၉၇ခုနှစ်မှစ၍ Yandex သည် ကမ္ဘာ့ အဆင့်မှီ၊ ပြည်တွင်းနှင့်ဆက်စပ်သော ရှာဖွေရေးနှင့် အချက်အလက် စုဆောင်းရေး ဝန်ဆောင်မှုများကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ထို့ အပြင် Yandex သည် ဈေးကွက်များတွင် ဦးဆောင်မှုပေးနေသော ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ဆောင်မှုများအပြင် အခြား mobile applications များအား ကမ္ဘာအဝှမ်းရှိ သန်းချီသော အသုံးပြုသူများ အတွက် လုပ်ဆောင်ပေးထားပါသည်။ To contact Yandex, please visit https://yandex.com/company/contacts/
"PostgreSQL 10 တွင်ရှိသော sychronous replication များအတွက်သုံးနိုင်သည့် Quorum commit သည် သုံးစွဲရာတွင် ကွန်ပျူတာ အလုပ်လုပ်မှု နှောင့်နှေးချိန် မရှိဘဲ database infrastructure များ၏ ပြုနိုင်စွမ်း ပိုမို ကောင်းမွန်စေသည် ။ ဤလုပ်ဆောင်ချက်သည် windows များကို ကြာရှည်ထိန်းသိမ်းပြုပြင်ရန်မလိုအပ်ပဲ ကျွန်တော်တို့ ၏ database infrastructure ကိုအဆက်မပြတ်သုံးစွဲ၊မြှင့်တင်ခြင်းပြုလုပ်နိုင်သည်" ဟု Curt Micol,Staff Infrastructure Simple Finance.
၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် 272စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး Simple လူအများ၏ဘဏ်အမြင်နှင့် ယင်းတို့ ၏ငွေကြေးဆိုင်ရာ အတွေးအခေါ်များကိုပြောင်းလဲပေးနေသော နည်းပညာ ကုမ္ပဏီ တစ်ခုဖြစ်သည်။ Simple ၏ထုတ်ကုန်များသည် ငွေကြေးနှင့်ဘဏ္ဍရေးဆိုင်ရာများကို app တစ်ခု အဖြစ် ပေါင်းစပ်ပြီး အသုံးပြုသူများ လိုအပ်သော အရာများကို ငွေကြေးစုဆောင်း ပေးပြီး လိုချင်သော အရာများအတွက် သုံးစွဲမှုထိန်းသိမ်းနိုင်အောင် ကူညီလုပ်ဆောင်ပေးသော ကိရိယာများပါဝင်သည်။ Contact Simple at press@simple.com
PostgreSQL သည် ငွေကြေးအထောက်အပံ့ပေးခြင်း၊ hosting resources များစီစဉ်ပေးခြင်းနှင့် developers များကိုစပွန်ဆာပေးသော ကုမ္ပဏီများစွာ၏ အားပေးထောက်ခံမူ များကိုပိုင်ဆိုင်ထား ပါသည်။ See our sponsors page for some of these project supporters.
PostgreSQL Support ကိုပေးနေသောကုမ္ပဏီအသိုင်းအဝိုင်း များစွာလည်းရှိပါသည်။ , ဤအသိုင်းအဝိုင်းများတွင် တစ်ဦးတည်းပိုင် ကုမ္ပဏီများမှစ၍ နိုင်ငံတကာ အခြေစိုက် ကုမ္ပဏီများပါဝင်သည်။
လှူဒါန်းခြင်း များကို ဝမ်းမြောက်စွာ လက်ခံပါသည်။
သို့မဟုတ် အောက်ဖော်ပြပါဆိုင်မှ အချို့ သော ရောင်းကုန်များဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ Zazzle PostgreSQL Store